Taux de change 21 janvier 2019: 1 USD = Ar 3 590.641 EUR = Ar 4 089.42 Taux de change 28 janvier 2019:1 USD = Ar 3 526.221 EUR = Ar 4 029.54
Amin’ny fotoana andraisan’ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina ny fahefana dia misy ny tondro ara-toekarena tsara ho fantatra. 7,2% ny tahan’ny sondrobidim-piainana. Eo amin’ny taham-pifanakalozana ara-bola indray dia 4 107,19 Ar ny 1 Euro raha toa ka 3 610,94 Ar ny 1 dolara amerikanina. Mbola ny vidin-tsolika nihatra nanomboka ny 04 desambra 2018 kosa no hita eny amin’ireo toby mpaninjara dia 4 200 Ar ny litatry ny lasantsy, 3 550 Ar ny gazoala ary 2 630 Ar ny solitany fandrehitra.
jeudi, 17 janvier 2019 08:59
Orinasam-panjakana: Manomboka miarin-doha ny CNAPMAD
Teknisina maherin'ny 80 isa no nahazo fiofanana ho fahaizamanao hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny orinasa CNAPMAD. Tao anatin'ny taona maro no nandalo fotoan-tsarotra ity orinasam-panjakana ity. Tsy maintsy averina amin'ny laoniny izany, hoy ny Tale Rajaonarivelo Brysola. Izay no tanjona tratrarina amin'ity taona ity. Ankotra ireo dia hanomboka ihany koa ny asa fanarenana ireo efitrano izay efa tena simba mba hahafahana indray mamelomaso ity orinasam-panjakana ity. Efa hanomboka tsy hoela ny andrana atao amin'ny famokarana ireo entana ilain'ny mponina andavanandro vokarin'ny CNAPMAD toy ny siô sy vera. Afaka mamokatra ireny isika ary afaka ihany koa mifaninana amin'ireo orinasa avy any ivelany. Afaka mamokatra fanaka samihafa ilaina amin'ny birao koa ny orinasa. Tanjona ny hanampy tosika ny fanomezana asa ho an'ny tanora, hoy hatrany ny Talen'ny CNAPMAD, Rajaonarivelo Brysola.
mercredi, 16 janvier 2019 13:43
Fiarovana ny lavanila: Hanana ny heviny ireo mpandraharaha any SAVA
Hifamory ireo mpandraharaha lavanila mivondrona ao anatin’ny fikambanana G.P.A.S (Groupement des Préparateurs et Acheteurs de Vanille de la SAVA) ny zoma 18 janoary ho avy izao. Ho fantatra mandritra izany na mbola hirotsaka amin’ny fiarovana ity vokatra lavanila ity toy tamin’ny taona lasa izy ireo na tsia, noho fahakiviana nahazo azy ireo noho ny nafitsoky ny mpanao politika, na teo aza ny ezaka nataon’izy ireo.
vendredi, 30 novembre 2018 13:45
Ady amin'ny halatr'omby: Tsy basy na fanenjehana dahalo fotsiny
Efa noresahitsika teto izy ity fa fampatsiahivana fotsiny. Manana ny toerany lehibe ny omby eo amin'ny kolotsaina Malagasy. Fety, fahoriana, fanambadiana, fivavahana, fanompoana, sakafo, banky fitehirizam-bola... Raha avo roa heny tamin'ny isan'ny mponina ny isan'ny omby 50 taona lasa, izao efa atsasaky ny isan'ny mponina sisa. 8 millions any sisa amin'ny 25 millions mponina. Ny Malagasy dia tsy miompy omby ho anina, fa mikajy vola anaty omby noho ny tsy fisian'ny politika matotra momba ny banky. Rehefa mila vola ny Malagasy vao mivarotra, ka tsy maharaka ny filan'ny mpihinan-kena ny omby amidy ho vonoina.
mercredi, 24 octobre 2018 09:55
Ivato: Première édition de la Foire Internationale des « Gemmes et Bijoux de Madagascar »
La première édition de la Foire Internationale des Gemmes et Bijoux de Madagascar a ouvert ses portes ce 23 octobre, et ce jusqu’au 27, au Mining Business Center, à Mamory, Ivato. Elle est organisée conjointement par le Ministère des mines et du pétrole, le Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) et l’Institut de Gemmologie de Madagascar, afin de contribuer à la promotion du secteur minier, tant au niveau national qu’international.
Nosokafana ny alarobia 17 oktobra 2018 ity tsenabe lavanila izay andraisan’ireo fikambanana tantsaha na koperativa izay mamokatra vokatra maro samihafa toy ny kafe, cacao, lodsia, indrindra ny lavanila avy eto Madagasikara izay miara-miasa amin’ny Fairtrade Africa. Natao izao tsenabe izao dia mba hivondronan’ireo fikambanana sy ny koperativa ireo mba hizara traikefa eo amin’ny fahaizamanao ny fambolena amin’ny famokarana lavanila indrindra, ary amin’ity ihany koa dia fotoana iray hahafahin’izy ireo mihaona mivantana amin’ireo vahiny izay mpanafatra ity vokatra ity avy aty amintsika.
Notanterahina ny zoma 05 oktobra 2018 tetsy amin’ny Resto Capricorne ny atrik’asa momba ny hoavin'ny sehatra lavanila aty amin’ny Faritra SAVA. Nandritra izany no nandraisana paik’ady ho entina hanatsarana ny seha-pihariana lavanila eto amintsika hoy ny DDR SAVA Seramila Teddy, satria teto no nahaizana inona no laharampahamehana, izay lohalaharana tamin’izany ny fandriampahalemana ary ny fandaminana ny tsena, ary eo ihany koa ny famaritana ny daty tokony hisokafan'ny tsena amin’ny taom-pihotazana manaraka io. Zavatra iray kosa no mba angatahinay avy amin’ny Plateforme Filière Vanille, hoy ny SG PRCP Rabenefintra Henri, dia ny mba ho tena fanoitra amin’ny fampandrosoana ny Faritra amin’izay ity lavanila ity, satria tsy izay ny zava-mitranga amin’izao fotoana izao fa lasa miteraka olana ho an'ny toekaren'ny Faritra satria misy zavatra mandringa.
La réhabilitation totale du barrage hydroagricole d’Ambatovita, et l’adjonction de nouveaux canaux d’irrigation est, à ce jour, un des plus grands projets structurants mis en place pour le développement de l’agriculture dans la Région Ihorombe. Il s’agit de la reconstruction totale d’un barrage, de 110 m de long, et du réseau d’irrigation, d'une longueur de 2,1 km, sur la rive droite de la rivière Ilanana ; puis, de l'extension du réseau d’irrigation sur la rive droite sur 10,9 km ; et enfin la création d’un nouveau réseau d’irrigation sur la rive gauche. Au final, ce sont 540 hectares de rizières qui sont aujourd’hui irrigués, en permanence, dans le périmètre de la commune rurale d’Ambatolahy.
lundi, 17 septembre 2018 15:23
Herintaona aty aorian'ny nivoahan'ireo vola vaovao ireo, maro amin'ny Malagasy no tsy zatra ary misy mampifangaro, eny voafitaka amin'ny vola 5000Ar sy 500Ar noho ny lokon'izy ireo mitovitovy. Tamin'ny 17 jolay 2017 no navoakan'ny Banky Foiben'i Madagasikara hanankery eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny ravim-bola vaovao 20.000Ar, 10.000Ar, 5.000Ar ary 2.000Ar. Ny nivoahan'ireo vola ireo no ela dia niparitaka koa ny vola sandoka vaovao.